Ao Aleppo, Maka Razana Avy Amin’ny Korotam-Bato Isan’Andro ny Mpanolotena ‘Satro-Potsy’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2016 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, русский, Español, Nederlands, Français, عربي, 日本語, українська, English
Sary nivoaka ao amin'ny pejy Facebook Fiarovana Sivily Manohana an'i Syria.
Ity lahatsoratra nosoratan'i Joyce Hackel ity dia nivoaka tao amin'ny PRI.org ny 4 aogositra 2016 ary naverina navoaka noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mirotsaka avy any an-danitr'i Aleppo isan'andro ny baomba.
Rehefa mandre ny firohondrohon'ny fiaramanidina avy ao ambony ny mponina, Betsaka no nitady fialofana.
Fa ny vondrona ny mpiasa an-tsitrapo, fantatra amin'ny anarana hoe “Misatro-potsy” kosa manohy mizotra mankany amin'ny faharavana. Ary amin'izao andro izao dia tahaka ny tsy mijanona izany ny asan'izy ireo. .
“Toy ny helo ny andro maromaro farany teo”, hoy i Isimaela Alabdullah 29 taona ao amin'ny fikambanana Satro-Potsy. “Tsy manana herinaratra izahay aty Aleppo, eny rehetra eny ny aizina… Ny zavatra anananay eto fotsiny izao dia daroka baomba, baomba, baomba.”
Voadaroky ny fiaramanidina mpiady Rosiana sy Syrianina nandritra ny volana maro i Aleppo. Nanakana ny ankamaroan'ny lalana ao ivelan'ny tanàna ny tafi-panjakana tamin'ny herinandro lasa teo, nahavoafandrika sivily 250000 tao amin'ny faritry ny tanàna fehezin'ny mpikony. Misintona vatana sivily avy ao amin'ny korontan-trano ravan'ny fanafihana an'habakabaka isan'andro ny mpiasa an-tsitrapo. Ny fiasana omaly no tena matroka hoy i Alabdullah .
Hoy izy hoe “Niasa be hatrany izahay nandritra ny 10 ora hanesorana ny razana hiala amin'ny korontan-trano,”. “Nanaisotra razana 10 izahay, anisan'izany ny ankizy telo.”
Nilaza i Alabdullah fa nahatsoaka vehivavy iray naratra ny ekipany ka nitondra azy haingana tany amin'ny hopitaly ka voavotra ny ainy.
Mbola fantatra ihany koa amin'ny anarana amin'ny Fiarovana Sivily Syriana, izay miasa amin'ny faritr'i Syria fehezin'ny mpanohitra, ny Satro-Potsy ary vitsy amin'ny mariky ny fiarahamonim-pirenena niroborobo tao Aleppo fahiny. Mampihevaheva fanahy maro ao an-tanàna, izay lazain'ny Alabdullah hoe matetika voambahambahana ny lalàna ary mikatona ny tsena, ny fahatongavan'izy ireo.
Toy ny maninindoza isan'andro ireo mpilatsaka an-tsitrapo. Manintona vahoaka izay matetika mampaka fanahy ho atao lasibatra amin'ny fanafihana an'habakabaka ny fandarohana baomba.
“Raha midaroka baomba toerana iray ry zareo, dia miandry anay ho tonga any ry zareo, ary miverina midaroka baomba indray,” hoy izy.
Maty voatifitra ny roa amin'ny mpiara-miasa amin'i Alabdullah tamin'ny volana lasa raha mbola niasa teo amin'ny toerana iray voadaroka baomba ka nanao tampody fohy niverina nidaroka baomba teo indray ny voromby mpiady. Maty teo noho eo tamin'ny fandarohana baomba fanindroany ny iray amin'ireo misatro-potsy. Ny iray hafa kosa tapa-tanana sy tapa-tongotra ary tany amin'ny hopitaly no niala aina.
Saingy nilaza i Alabdullah fa tsy mety kivy izy sy ny mpiara-miasa aminy.
“Rehefa mahita olombelona mangirifiry ianao dia mila manao zavatra hanavotana azy ireny,” hoy izany. “Heveriko fa maherifo ireo rehetra mbola mipetraka ao Aleppo.”